China zvinhu zvenaironi chikamu jekiseni Kuumbwa Mugadziri uye mutengesi | Mestech
Zvinhu zvenaironi chikamu jekiseni Kuumbwa kunonyanya kushandiswa kugadzirwa kweinjiniya zvikamu.Nylon zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mumotokari, zvigadzirwa zvemagetsi, kutaurirana, zvemagetsi.
MESTECH ine jekiseni kuumbwa michina masosi muhukuru kubva pamakumi mapfumbamwe kusvika mazana maviri ematani matani, zvichitibvumidza kugadzira nylon mapurasitiki zvikamu zvehukuru hwakawanda uye zviyero. Tinofara kukurukura zvinhu zvenaironi jekiseni kuumbwa mazano uye mhinduro nemumwe mutengi kuona mashandiro uye zvigadzirwa zvakakodzerana nebasa rako.
Nylon jekiseni kuumbwa zvikamu zvinoshandiswa muminda mizhinji nekuda kweakanaka michina zvivakwa, senge magiya pulleys, mavhiri, akakwira magetsi zvikamu, cryogenic nharaunda michina, ultrasonic nharaunda michina, pamwe nekutsiva simbi zvikamu uye aruminiyamu zvikamu zvemuchina uye zvezuva nezuva zvishandiso.
Chii chinonzi nylon jekiseni rakaumbwa zvikamu zvinoshandiswa?
Zvinhu zveNylon zvinoshandiswa mune yakakura yakakura akasiyana mafekitori maficha nekuda kwayo inoshamisa michini uye magetsi zvivakwa, inopfuura mukuoma, kupfeka kuramba uye kemikari kuramba. Zvinhu zvenaironi jekiseni Kuumbwa kunogadzira epurasitiki zvikamu zvinoshandiswa mukuwanda kwemaindasitiri uye maficha, akadai se:
Nguo dzevatengi neshangu
Mitambo nemitambo yekuvaraidza
Nylon inoshandiswa pamashandisirwo akasiyana siyana kusanganisira zvipfeko, kusimbisa mumidziyo yerabha sematai emotokari, kuti ishandiswe setambo kana tambo, uye nenhamba dzinoverengeka dzejekiseni dzakaumbwa dzemotokari uye zvemuchina. Iyo ine simba rakatanhamara, isinganetsi kune abrasions uye hunyoro hwekudzivirira, inogara kwenguva refu, inopesana nemakemikari, yakasununguka uye iri nyore kusuka. Nylon inowanzo shandiswa seinotsiva simbi dzesimba. Iyo ipurasitiki yesarudzo yezvinhu zviri muchikamu cheinjini dzemotokari nekuda kwesimba rayo, kutsiga kwetembiricha, uye kuenderana kwemakemikari.
Sezvo nylon ine simba rakakombama rakakotama, inozvikweretesa zvakanaka kune zvikamu zvinozoiswa mukati-kati. Zvakare, neiyo yepamusoro yekupfeka kuramba uye yakaderera coefficient yekukwesana, nylon inoshanda mushe mukushandisa senge masiraidhi, mabheyari uye chero chishandiso chinoiswa kuburikidza nekufamba.
Zvinhu zvenaironi PA66 giya
Yemukati tambo nylon chifukidziro
Yakakwira voltage nylon chinja shaft
Yakareba sleeve yemagetsi
Nylon holster pister chifukidziro
Nylon inotungamira pulley
YeMota chiutsi fan
Ndeapi misiyano yemhando dzakasiyana dzeNylon
Munguva yemazuva ano inogadzirwa nenhamba huru yemafemu, imwe neimwe iine yavo yekugadzira maitiro, yakasarudzika fomula, uye mazita ekutengesa. Unogona kutarisa izere runyorwa rwevanogadzira zvinhu pano.
Misiyano yakajairika inosanganisira Nylon 6, Nylon 6/6, Nylon 66, uye Nylon 6/66. Iwo manhamba anoratidza huwandu hweatomu dzekabhoni pakati peacid uye amine mapoka. Imwe manhamba (senge"6”) zvinoratidza kuti izvo zvinhu zvakagadzirwa kubva kune imwechete monomer mukubatana neayo pachayo (kureva kuti Morekuru seyese homopolymer). Maviri manhamba (senge"66”) ratidza kuti iwo marongedzero akagadzirwa kubva kune akawanda mamonomeri mukubatana neumwe neumwe (comonomers). Iyo slash inoratidza kuti izvo zvinhu zvinoumbwa nemapoka akasiyana emakomomoun mukubatana neumwe (kureva., Ndeye copolymer).
Nylon inogona zvakare kusanganiswa nemhando dzakasiyana siyana dzekuwedzera kuti ubudise akasiyana akasiyana ane akasiyana zvinhu zvinhu.
Unoziva here iwo matipi ejekiseni kuumbwa nylon?
(1) .Kukora dhizaini yemadziro kana mbabvu
Nylon ine yakaderera shrinkage uye inoenderana nehuremu hwemadziro ezvikamu. Pafungidziro yekuvimbisa zvivakwa zvezvigadzirwa, ukobvu hwemadziro hunofanira kuve hudiki sezvinobvira. Iyo mukobvu zvigadzirwa ndeyakakura iyo shrinkage iri, uye simba harikwani, saka kusimbisa kunogona kuwedzerwa.
(2) Dhizaini kona
High shrinkage, nyore demoulding, ari gwaro angled pamusoro demoulding anogona kuva 40 ' -1゜40'
Iyo yekupisa yekuwedzera mwero wenayiloni iri 9-10 kakapetwa pane iyo yesimbi uye 4-5 kakapetwa hukuru pane iyo yealuminium. Simbi inoisa inodzivirira kudzikira kwenylon uye inokonzeresa kushushikana, izvo zvinogona kukonzera kupaza. Zvinotarisirwa kuti ukobvu wakakomberedza kupinza haufanire kunge uri pasi pehupamhi hwesimbi yekuisa.
Nylon iri nyore kutora mwando uye inofanira kuomeswa isati yaumbwa.
(5) .Mold kubuda
Nylon ine yakaderera viscosity, uye inozadza iyo mold nekukurumidza pasi peiyo yakanyanya kudzvanywa jekiseni. Kana iyo gasi isingakwanise kuburitswa munguva, chigadzirwa chinogumburwa nemabhuru emhepo, kutsva uye zvimwe zvikanganiso. Iyo yekufa inofanirwa kuve neiyo yekuzadza gomba kana yekuzadza groove, iyo inowanzo kuvhurwa yakatarisana negedhi. Iyo dhayamita yegomba rekudzimisa iri_1.5-1 mm, uye kudzika kweiyo chiutsi groove iri pasi pe0.03 mm
Mestech yakazvipira kugadzira jekiseni muforoma uye jekiseni kuumbwa kugadzirwa kwenylon zvikamu zvevatengi. Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kuti utaure nesu kana uchida ikozvino zvimwe.
Pashure: Nylon shaft yemagetsi emagetsi switch
Zvadaro: Zvikamu zvepurasitiki zvemagetsi